घरको कुनै कुनामा फोन छ, तर भेट्न सकिएन । कतै गइएको थियो, फोन छोडेर आइयो। आफ्नो फोन कहाँ छ, कसरी थाहा पाउने?
गुगलको 'एन्ड्रोइड डिभाइस म्यानेजर' ले तपाईको फोनको 'लोकेसन' भनिदिन्छ। 'एन्ड्रोइड डिभाइस म्यानेजर' को यही फिचर अब सिधै गुगल सर्चमा उपलब्ध भएको गुगल'ले गुगलप्लस मार्फत जनाएकोछ। गुगलमा गएर 'find my phone' टाइप गरेपछि, अब फोनको लोकेसन सिधै सर्च रिजल्ट पेजको माथिल्लो भागमा देखिन्छ। घरमै छ भने त घन्टी बजाउन पनि सकियो, फोन 'साइलेन्ट' मोडमा भएपनि, गुगलबाट फोन गर्दा चर्को आवाजले घन्टी बज्छ।
फोनको सुरक्षाको हिसाबले, 'एन्ड्रोइड डिभाइस म्यानेजर' प्रयोग गर्नै पर्ने 'फिचर' हो। फोन हराएको खन्डमा, 'एन्ड्रोइड डिभाइस म्यानेजर' को ड्यासबोर्डबाट आफ्नो फोन, खोज्न सकिन्छ, 'लक' गर्न सकिन्छ, अनि फोनमा भएका 'डेटा' सबै मेट्न पनि सकिन्छ। तपाईको फोन सँधै अनलाइन नहुनसक्छ वा 'लोकेशन अन' नभएको खन्डमा, गुगल'ले तपाईको फोन भएको अन्तिम 'लोकेसन' देखाउँछ । गुगलमा सर्च गर्दा तपाई आफ्नो गुगल एकाउन्टमा 'साइन इन' भएको हुनुपर्छ।
पूनश्च: आफ्नो एन्ड्रोइड फोन/ट्याबलेटको सुरक्षाको लागि 'एन्ड्रोइड डिभाइस म्यानेजर' प्रयोग गर्नुहुन्छ भने मात्रै, गुगल सर्चबाट सिधै आफ्नो फोन खोज्न सक्नुहुन्छ। यदि गुगल'ले तपाईको फोन भेट्टाउन सकेन भने, 'एन्ड्रोइड डिभाइस म्यानेजर' को सेटिङ र आफ्नो फोनको सेटिङमा पूनर्विचार गर्नुहोला ।
sanklp April 17, 2015 at 8:59 AM
मोबाइलमा इन्टरनेट नचलेको रहेछ भने के हुने हो ?
Aakar Anil April 17, 2015 at 9:16 AM
कुनै समयमा, लोकेशनको डेटा गुगलमा पठाइएको हुनसक्छ, त्यस्तो समयमा अन्तिम लोकेशन देखाउँछ । इन्टरनेट नै चलाएको छैन, डिभाइस म्यानेजर नै चलाइएको छैन भने, गुगलमा सर्च गरेर फोन भेटिँदैन । ;)
Kabin Shrestha April 17, 2015 at 11:59 AM
यस्तो बेलामा भने कामै रहेन भन्दा पनि हुन्छ । त्यसैले मैले बिगत ४ वर्ष देखि चलाईएको androidlost.com को app को बिकल्प मिलेन, यसमा भने हराएको mobileमा data/wifi enable गर्न मिल्छ SMS पठाई ।
गुगलको फिचर देखाउने दाँत मात्र लाग्यो मलाई ।
prithivi April 17, 2015 at 4:13 PM
i phone5 harayeko 1 mahina bhayo icloud bata find gar bhanda device offline bhanxa.. . ma rohera baseko xu dai .. any idea?
saurjk April 21, 2015 at 9:14 PM